Matekiniki Ekuchenesa Wiricheya | KarmanHealthcare.com
Kuchenesa a wiricheya zvinogona kuva zvakaoma asi kwete zvakaoma sekugara mune imwe. Zvizhinji mavhiripu kazhinji inopa kunyaradza kwakanyanya kune avo vanoashandisa kuita mabasa ezuva nezuva. Asi haugone kudzivirira grime uye kazhinji inoenda zvakadzika kupfuura kungoita mavara enguva dzose.
Iwe unowanzo sangana nekucheka, notches, bits yeturu, mitsara yerabha uye mamwe mavara evhu. Matekiniki anotevera anogona kushandiswa kudzivirira uye kudzikisira izvi zvisirizvo:
1. Chengetedza Masvingo
Nzira inoshanda yekuchengetedza madziro kushandisa mapurasitiki. Iwe une zvipikiri-pane kana kunamira-pane sarudzo.
2. Tora A Chipiri wiricheya
Kuti uchengetedze uriri mukati meimba yako kubva kumatura etsvina, ungangoda kufunga nezve wiricheya zvekushandisa zvemukati chete. Kunyangwe ivo vangangotora chinzvimbo chakati wandei, kubata nevhu mukati memba yako hakufadze futi. Tsvina kubva kumavhiri inogona kukanganisa kukuvadza kapeti kana chero rudzi rwevhu. Kana iwe uine wiricheya zvekushandisa zvemukati chete, unogona kudzivirira mamaki.
Aya e-pre-emptive tricks akanaka asi pakupedzisira iwe uchafanirwa kubata nemavara uye mamaki ambotaurwa. Mhinduro dzinotevera dzinogona kushandiswa pakuchenesa yako wiricheya:
3. Girazi Kuchenesa Solution
Girazi rinosuka rakanakira kubvisa mamaki erabha pasi. Mavara erabha anongova madiki ekuvaka saka shandisa purasitiki yekukweshesa kana nyoro yakachena jira zvichienderana nerudzi rwevhu.
Kana paine mamaki erabha pane iyo kapeti, iwe ungangoda kuti iitwe zvinehunyanzvi. Mimwe kapeti inogona kucheneswa kushandisa kubheka soda nehydrogen peroxide, kukwiza doro uye nemimwe mhinduro.
4. Kunyangwe WD-40 Inoshanda
WD-40 yakanaka pakubvisa tsvina uye kuchenesa nzvimbo zhinji. Asi imwe pasi inogona kukuvadzwa neiri girizi mvura. Ramba uchifunga kuti pasi rakacheneswa neWD-40 inogona kunge ichitsvedza kwenguva.
Iwe unongoda hushoma uye iwe unofanirwa kuchenesa nzvimbo yacho mushure mekunge wabvisa mamaki. Mucheka wakanaka wekupinza wakanakira izvi. Jira nyorova rine madonhwe mashoma ekukwesha doro rinoshandawo zvakanaka.
5. Iyo Inodhura uye Inobudirira Kuchenesa Solution
Unogona kuwana chaiwo ekuchenesa mhinduro kubva kune yako wiricheya mutengesi, asi mapfapfaidzo aya anogona kunge akadhura chaizvo. Kana iwe uchinyatso famba nhare, mhinduro dzekuchenesa dzakagadzirirwa kushanda zvakanyanya zvakare. Kana mamaki acho akanyatsoshata, unogona kugara uchishandisa masevhisi ekambani yekuchenesa.